Banyere Anyị - Hebei Xuxiang Bicycle Co., Ltd.
Anyị bụ ndị ọkachamara Children Ride Toys Manufacturer si China, nke bụ specialized na Children Toys Mepụta na mbupụ azụmahịa.Our isi ngwaahịa: Children Ịnya Egwuregwu, Ụmụaka Bicycle, Ụmụaka Balance Bike, Kids Tricycle, BMX igwe kwụ otu ebe, MTB Bike, Electric Cars na moto.
Ụlọ ọrụ dị na mpaghara mmepụta ihe Dongpu, Guangzong County, Xingtai City, Hebei Province, Emechiri emechi nke nnukwu ụmụaka ụmụaka ji egwuri egwu n'ichepụta ite nke China, na ọnọdụ dị mma na njem dị mma, nke dị mma iji ruo ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ oloko.
Onye na-ebu ihe
Ndị otu anyị na-arụ ọrụ bụ ndị mmebe ire ere, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ogbako, ngalaba ịzụrụ ihe, onye na-ahụ maka akwụkwọ, onye na-ahụ maka mbupu Nkwenye mma na njikwa mma.
Anyị Factory dị na Dongpu ulo oru ebe, Guangzong County, Xingtai City, Hebei Province, Mechie nke kasị ukwuu Children ụmụaka ji egwuri egwu n'ichepụta ite nke China, na uru ọnọdụ na adaba njem.
anyị emepụtala semblance, imewe, ngwaahịa-mgbakọta na àgwà ule usoro , anyị na-ere nke ọma na-agbasa n'elu karịa 30 mba na mpaghara. Ọ nwetara n'ozuzu ahịa nkwenye na elu otuto, enwetawo ntụkwasị obi nke ndị ahịa na nkwado. Ma nọgide na-enwe mmekọrịta nkwado ogologo oge.
Ebumnuche anyị bụ ịnye ndị ahịa niile, ịdị mma na ọrụ ezi uche dị na ya iji mee ka ndị ahịa anyị ọ bụla tolite na ahịa ha dabere na ahụmịhe afọ 8 anyị na ndị otu pụrụ iche.
Anyị nwekwara ike imekọ ihe ọnụ na anyị magburu onwe suppliers nke na-eto eto na anyị ọnụ na gara aga 8 afọ. Anyị na-ekele ndị ahịa niile na-anọnyere anyị, ihe niile na-arụ ọrụ maka ebumnuche anyị siri ike yana ndị na-eweta ihe niile na-akwado anyị mgbe niile n'ihe kacha mma.
Agbanyeghị, anyị na-anabata ndị ahịa ọhụrụ ka ha mara banyere anyị, ịtụkwasị anyị obi, na ịbụ enyi anyị, anyị ga-anọ ebe a ichere gị. Ọ bụrụ na ị na-achọ onye nrụpụta, anyị nwere obi ụtọ ịnye ọrụ.